Chechitatu chimurenga maindasitiri | Green Renewables
Adriana | | Kumba Economics, Renewable simba
ari kushandurwa kwemaindasitiri nhoroondo uye magariro maitiro anoshandura nzira iyo yakawanda yebudiriro inoenderana nayo simba.
Munhu anoda simba kuti akwanise kuita ake akakosha mabasa uye kubva zvaakawana kwakasiyana masosi akashanduka uye akavandudza hunyanzvi hwake hwehunyanzvi.
Yekutanga indasitiri shanduko yaive iyo marasha, chimurenga chechipiri chaive magetsi zvichibva pa petroleum uye chechitatu kushandiswa kwe simba rinowedzeredzwa semanyuko esimba.
Pfungwa iyi yakagadziriswa nenyanzvi yezvehupfumi Jeremy Rifkin uyo anotenda kuti nzira chete yekuvandudza hupfumi hwenyika kutsiva iyo zvisaririra.
Hupfumi hwepasirese hausisiri kushanda, hwaigara huine kusakwana asi ikozvino hwave kusvika pamuganhu wekusimudzira nekuda kwenzvimbo dzakanyanya kwazvo dzehurombo nekusaenzana pasirese, huwandu hwakanyanya hwekusvibisa nekuparadza kukuru kwezvinhu zvese zvepasi.
Izvo zviri kukonzera matambudziko akakomba ezvakatipoteredza asi chinonyanya kuzivikanwa ndeche kuchinja kwemamiriro ekunze asi kwete chete.
Nyika dzinofanirwa kupa zano uye kubatsirana kuti vabudirire yavo nyowani yekuvandudza indasitiri yakavakirwa pa simba rakachena uye inogona kudzoreredzwa, iyo inobvumira kukura kwenguva refu kwehupfumi.
La green technology yakashandiswa kune ese marudzi ezvigadzirwa zvakakosha kudzikisa mwero we kushandiswa kwesimba asiwo zvinosvibisa zvishoma.
Yechitatu yeindasitiri shanduko inofanirwa kusimudzira yakaderera kabhoni hupfumi.
Hupfumi hwacho hwakanganwa kuti hunofanirwa kuve hwekushandira munhu kwete kumuisa pasi, zvakakosha kuti uwane shanduko yefilosofi uye pfungwa dzehunyanzvi kuti uwane shanduko yechokwadi inobvumidza munhu wese kuverengerwa muhurongwa.
Sezvinoonekwa munhoroondo yese, iwo maviri apfuura mamukira aigara akavakirwa mukusaenzana kwenzanga, vashoma vane zvakawanda uye vazhinji vane zvishoma kana havana.
ari simba rinowedzeredzwa Izvo zvinotipa mukana wekuti tishandure nekugadzirisa hupfumi hurongwa kuti huve hwakarurama, hwakaenzana kune ese magariro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Chechitatu chimurenga maindasitiri